डिभी, ग्रिनकार्ड वा आप्रवासी भिसा स्पोन्सरका लागि स्पोन्सरकर्ताको आम्दानी कति चाहिन्छ ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
डिभी, ग्रिनकार्ड वा आप्रवासी भिसा स्पोन्सरका लागि स्पोन्सरकर्ताको आम्दानी कति चाहिन्छ ?
परिवारमा आधारित ग्रिनकार्ड वा आप्रवासी भिसा स्पोन्सरका लागि स्पोन्सरकर्ताको आम्दानी पोभर्टी गाइडलाइनको १२५ प्रतिशत भन्दा धेरै हुनुपर्ने बताइएको छ । पोभर्टी गाइडलाइनको १२५ प्रतिशत भनेको कति हो ? यसबारे धेरैको जिज्ञासा र अन्यौल समेत देखिन्छ ।
नयाँ मापदण्ड अप्रिल १ बाट लागु भएको हो । गतबर्षको तुलनामा यो बर्ष स्पोन्सर गर्दा आम्दानी बढी हुनुपर्ने बनाइएको छ । अर्थात् आम्दानीको मापदण्ड बढाइएको छ ।
अलास्का र हवाई राज्यमा बस्नेहरुका सन्दर्भमा यो रकम अलग्गै रहेको छ भने अरु ४८ राज्यमा बस्नेहरुका सन्दर्भमा यो रकम अलग रहेको छ ।
४८ राज्यमा बस्नेहरुका सन्दर्भमा यदि स्पोन्सरकर्ताको परिवारका सदस्यहरुको संख्या आफूसहित २ रहेको छ भने उसको बार्षिक आम्दानी कम्तीमा २१ हजार ७ सय ७५ डलरभन्दा माथि हुनुपर्छ ।
त्यस्तै परिवारका सदस्यहरुको संख्या ३ रहेको छ भने बार्षिक आम्दानी कम्तीमा २७ हजार ४ सय ५० डलर हुनुपर्छ । परिवारका सदस्यहरुको संख्या ४ रहेको छ भने बार्षिक आम्दानी कम्तीमा ३३ हजार १ सय २५ डलर हुनुपर्छ ।
अमेरिकी सेनामा रहेकाहरुले आफ्ना दम्पत्ति वा छोराछोरीहरुलाई स्पोन्सर गर्दा भने अन्यको तुलनामा कम आम्दानी भएपनि हुन्छ ।
स्पोन्सरकर्ता अमेरिकी सेनामा रहेको छ र उसले दम्पत्ति वा छोराछोरीलाई स्पोन्सर गर्नुपर्ने छ भने पोभर्टी गाइडलाइनको १ सय प्रतिशतमात्र आम्दानी भए पुग्छ ।
४८ राज्यहरुमा बस्नेहरुका लागि आम्दानीको मापदण्ड
परिवारका सदस्यहरुको संख्या ५ रहेको छ भने बार्षिक आम्दानी कम्तीमा ३८ हजार ८ सय डलर हुनुपर्छ । परिवारका सदस्यहरुको संख्या ६ रहेको छ भने बार्षिक आम्दानी कम्तीमा ४४ हजार ४ सय ७५ डलर हुनुपर्छ ।
परिवारका सदस्यहरुको संख्या ७ रहेको छ भने बार्षिक आम्दानी कम्तीमा ५० हजार १ सय ५० डलर हुनुपर्छ । परिवारका सदस्यहरुको संख्या ८ रहेको छ भने बार्षिक आम्दानी कम्तीमा ५५ हजार ८ सय २५ डलर हुनुपर्छ ।
त्यो भन्दा माथि हरेक एकजना परिवारका सदस्यका लागि ५ हजार ६ सय ७५ डलर डलर थप्दै जानुपर्छ ।
हवाईमा बस्नेहरुका लागि आम्दानीको मापदण्ड
अलास्कामा बस्नेहरुका लागि आम्दानीको मापदण्ड